Ireo mpamorona 4 ao amin'ny Instagram ireo dia hanome anao ny fahaiza-mamorona rehetra azo atao | Famoronana an-tserasera
Instagram no iray amin'ireo loharanom-tsindrimandry lehibe indrindra ankehitriny ary ireto mpamorona 4 ireto dia hanompo anao handray izany sakafo isan'andro mamorona izany hamenoana ireo hevitra tadiavinay asa sy maro hafa.
Mpamorona 4 azontsika atao atambatra amin'ny sokajy samihafa ary izany dia hampatahotra anao hanao litera, mitady hevitra adala na ireo loko mamirapiratra hamenoana toerana haingo sasany.
Mpamorona manasongadina taratasy avo lenta ary ahafahantsika mitady isan'andro ny aingam-panahy ilaina amin'ny volavolantsika manokana. Ny fifantohana amin'ireo lahatsariny amin'ny alàlan'ny tànany izay ampianarany antsika ny kanto amin'ny fanoratana tanana mba hanao asa bebe kokoa noho ny asa tsara.
Mpanao sary Tale 3D sy sary mihetsika izay avy amin'ny kaontiny Instagram Mametraka antsika eo alohan'ireny sary an-tanàn-dehibe feno loko sy fiainana ireny mba hamoahana ny lafiny maloto indrindra azo atao. Tsy dia taraiky loatra amin'ny lohahevitra misy azy io ary afaka manome kofehy ny mpanara-maso Nintendo taloha.
Gianluca dia mifanohitra amin'ireo roa teo aloha mba hiresahana ireo zavakanto izay mampiavaka azy ny fampiasana mainty amin'ny ankamaroan'izy ireo, na dia tsy misy tsy ampy ihany koa aza ireo loko mena sy mafy hafa. Milalao zavatra be dia be izy amin'ny géometrique ary ny typography no iray amin'ny filan'ny nofo, araka ny hitanao amin'ny mombamomba azy Instagram.
Niara-niasa tamin'ny mpanakanto Leta Sobierajski sy ihany izahay tamin'ny farany ny tontolony feno loko sy zavaboary tsy manaja amin'ny karazany rehetra. Milalao be amin'ny lamaody izy ary ny fitafiany, tsy dia misy dikany, aza misalasala mampiseho ny tontolony manokana hanafika antsika amin'ny hadalany sy ny fahaizany mamorona. Aza adino ny fanendrena isan'andro ny lahatsorany ao amin'ny Instagram ary mando anao amin'ny famoronana voajanahary. Aza adino ireo tranonkala ireo mba hahitana aingam-panahy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mpamorona Instagram 4 hanaraka ho an'ny aingam-panahy
Raketo an-tsarimihetsika miaraka amin'ny Recordscreen.io avy amin'ny tranokalan'izy ireo